Otomatiki kushambadzira mabasa. Vhura sosi maturusi | Linux Vakapindwa muropa
Otomatiki kushambadzira mabasa. Vhura sosi maturusi
Mauri chinyorwa Pakutanga isu tanga tatsanangura kubatsira kwekushambadzira task automation maturusi. Ino ndiyo nguva yekutarisa maviri akanaka akavhurwa sosi sarudzo inowanikwa.
Pane chinhu chimwe chete chandinofanira kucherechedza. IniIyo internet izere nemazita e "yakavhurika sosi" kana "yemahara" zvirongwa zvechero chii. Kana munhu akaongorora zvakadzama, mumwe anoona kuti mashoma emapurogiramu aya anosangana nemamiriro acho.s yakasimbiswa neFree Software Foundation kana iyo Open Source Initiative.
Sezvazviri kazhinji aya haasi mabloggi asina kupihwa kukomputa, vanogona kutenda kuti mazwi akasununguka uye akavhurwa sosi software anoshanda kune mhinduro dzinosanganisira yemahara yekushandisa nzira.
Kujekesa; Kunyange HubSpot kana Mailchimp hazvivhurike, kunyangwe hazvo vaine zvirongwa zvemahara
1 Automating kushambadzira mabasa neakavhurika sosi mhinduro
2 Sarudzo mbiri
Automating kushambadzira mabasa neakavhurika sosi mhinduro
Nezvinangwa zvechinyorwa chino, misiyano inonyanya kukosha pakati pekuvhurika sosi uye mhinduro dzekutengesa ndeiyi inotevera:
Vhura sosi mhinduro dzinoda kuhaya server. kuiswa kweiyo inoshanda sisitimu uye ese mapurogiramu anodiwa kuti otomatiki maneja ashande. Izvi zvinosanganisira; webhu server, chirongwa chemutauro chinotsigira, dhatabhesi injini, nezvimwe. Unofanirawo kutarisira zvinyorwa.
Muchokwadi, vamwe vanopa webhu vanopa vanogona kunge vaine zvirongwa pamwe nemimwe mhinduro yatakakurukura yatove kuiswa, ichideredza yakawanda yebasa.
Kana iwe ukasarudza masevhisi masevhisi, vanoshanda neyakagovaniswa server pakati pevazhinji vashandisi. Iwe chete ndiwe uchave nekugona kune yako account uye yako data (mune dzidziso) asi iwe hauna simba pamusoro peiyo software yakashandiswa kana mukana wekutora mamwe ekuchengetedza matanho.
Ini handina kuyiyedza, asi zvinokwanisika kuti pakushandisa zvine mwero, mhinduro dzatinokurudzira dzinogona kuitirwa pane server repamba. asi, pakushandisa kukuru, yakanakisa iri chaiyo yakavanzika server. Mari yemwedzi nemwedzi yeVPS inogona kuita madhora matanhatu. Iyo yakachipa kwazvo Marichimp yekubhadhara chirongwa inotanga kubva pa6.
Kubhadhara masevhisi zvinoreva yakanaka nguva yekuchengetedza nekuti vane zvakajairwa mhinduro izvo pasina mubvunzo zvinosanganisira zvizhinji zvezvinhu izvo vashandisi vangangoda. Iwe unofanirwa kungoronga mishandirapamwe, tora vanofambidzana uye ndizvozvo. Iyo nyaya ndeyekuti iwe unoda imwe mhando yekugadzirisa, kana iwe unofanirwa kuenda kune rakakwirira chirongwa kana kumhanya naro.
Vhura mhinduro sosi haina miganho maererano nemaitiro avo (pamusoro pehunhu hwetekinoroji yevhavha) Kana iwe uchinge wapedza iyo yekumisikidza maitiro, mikana haina muganho.
Es yekutanga kuti unofanira kuedza. Kubva kune vanogadzira Drupal ivo pachavo, inokutendera kuti uite zvese zvaunoda kukwezva vangangove vatengi, taura navo kuburikidza neemail uye zvemagariro ezvematongerwo enyika uye vazvibatanidze nemapeji ekumhara uye zvemukati kurodha zvinopihwa.
Nekubatanidzwa kweyechitatu-bato masevhisi, unogona kubata vatengi kuburikidza neSMS uye WhatsApp.
Chinhu chakanakisa kugona kuita sarudzo dzemushandirapamwe. Semuenzaniso, kana mutengi X akasavhura maemail aakatumirwa, anobviswa kubva pane zvakanyorwa. Kune rimwe divi, kana mutengi Y achiratidza kufarira chimwe chidzidzo, zvimwe zvinopihwa zvinotumirwa kwaari pachiri.
Ini ndakaisa Mautic pane chaiyo yakavanzika server. Zvakatora googling zvishoma (ini ndakatevera matatu matatu akadzidziswa) asi zvaive zvisina kunyanya kuomarara.
VhuraEMM ndiyo yakavhurwa sosi vhezheni yechirongwa chebhizimusi chinonzi EMM. Nkana ine izere kugona kweMautic, asi inokwana kugadzirwa kwemashambadziro ekushambadzira akaenzana zvine mwero.
Pakati pehunhu hwayo kugona kushamwaridzana nekutumirwa kweemail kune rinotevera zuva kana chiitiko, shandisa html matemplate, chidimbu chevateereri nemaitiro, tarisa ndiani anovhura maemail uye anoona manhamba mune chaiyo nguva.
Iwo mapurogiramu maviri atiri kukurukura ane maficha avo akadudzirwa muchiSpanish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Otomatiki kushambadzira mabasa. Vhura sosi maturusi
Firefox 84.0.2 inogadzirisa kushushikana kwakanyanya
Tux Paint 0.9.25 inouya nenhau dzakatanhamara, senge kugona kugadzira maGIF ane hupenyu